कसले खसाल्यो चीनमा १३३ जना सवार विमान ? — Sanchar Kendra
कसले खसाल्यो चीनमा १३३ जना सवार विमान ?
बेइजिङ। चीनमा सोमबार दुर्घटनाग्रस्त विमानको भग्नावशेषबाट शव संकलन गर्ने र खोजी कार्य मंगलबार बिहान पनि जारी छ। १३२ यात्रु सवार चाइना इस्र्टनको बोइङ ७३७ दक्षिणपश्चिम चीनको ग्वाङसीको एउटा पहाडमा दुर्घटनग्रस्त भएको थियो।
छरिएको भग्नावशेषबाट मंगलबार पनि खोजी जारी रहेको चिनियाँ सरकारी सञ्चार माध्यम सीसीटीभीले जनाएको छ। सो विमान सोमबार दिउसो कुन्मिङ शहरबाट गुआन्झोउका लागि उडेको थियो। सो विमानमा सवार १३२ जनाकै अवस्था अज्ञात भएको बताइएको छ।
अमेरिकाका विदेशमन्त्रीमाथि विमान दुर्घटनाबारे भड्कियो चीन
चीनले अमेरिकाका विदेश मन्त्री एन्टनी ब्लिङ्कनको चीनबारे ताजा बयानमा कडा आपत्ति जताउँदै उनीहरुले चीनबारे झुटो फैलाइरहेको आरोप लगाएको छ ।
चीनको विदेश मन्त्रालयकी प्रवक्ता हुआ चुनयिंगले अमेरिकालाई संवेदनहीनको उपमा दिएकी छिन् । उनले ट्वीटरमा भनिन्, ‘चीनका जनता यात्रु विमान दुर्घटनाबाट आहत भइरहेका बेला अमेरिकी विदेशमन्त्रीले चीनमा ‘नरसंहार’ बारे झुटो फैलाइरहेका छन् । यो कति संवेदनहीन हो ।’
अमेरिकाका विदेशमन्त्रीले होलोकास्ट म्युजियमको आठौँ वर्षगाँठमा सोमबार होलोकास्टपछि अमेरिकाले सात पटक नरसंहार गरिएको छ भनेर निष्कर्ष निकालेको बताएका छन् ।
यसै क्रममा उनले बर्मामा रोहिङ्ग्याविरुद्ध नरसंहारको कुरा गरे र चीनबारे पनि उल्लेख गरे । चीनबारे कुरा गर्दै ब्लिङ्कनले भने, ‘मानवाधिकारको हनन गर्नेहरुले यसको नतिजा भोग्नुपर्नेछ ।
अमेरिकाले चीनभित्र र बाहिर असन्तुष्ट र मानवाधिकारको रक्षा गर्नेहरुको दमनको कोसिसका लागि चीनका थुप्रै अधिकारीमाथि भिसामाथि प्रतिबन्ध लगाएको छ ।’ ब्लिङ्कनको यो टिप्पणीले रिसाएकी चीनको विदेश मन्त्रालयकी प्रवक्ताले भनिन्, ‘एक नजर दिउँ त अमेरिकाले के गरेको छ र उनीहरुले के के गरिरहेका छन् ।
मूल अमेरिकीविरुद्ध नरसंहार, जातीय भेदभाव र बन्दुकसँग जोडिएको हिंसा । यसबाहेक इराकी र अफगानिस्तानविरुद्ध क्रुरता ।’ हुआ चिनयिङले आफूलाई मानवाधिकारको रक्षक ठान्ने अमेरिकी अधिकारी आफ्नो कल्पनाको दुनियाँबाट जागा हुनुपर्ने बताएकी छिन् ।
बाइडेन किन युक्रेनको भ्रमण गर्दैनन् ?
अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनको युक्रेन भ्रमणको सम्भावनाको बारेमा खोजी गरिएको थिएन । तर युद्धग्रस्त क्षेत्रमा नजानुका पछाडि केही कारण भएको ह्वाइट हाउसका प्रेस सल्लाहकार जेन साकीले बताएकी छन् ।
‘हामीले यस विकल्पको बारेमा खोजी गरेका छैनौ,’ युक्रेनको भ्रमणको बारेमा पनि सोच्न सकिन्छकी भनेर सोधिएको प्रश्नमा साकीले बताइन् । बाइडेनको युक्रेन भ्रमणको विषयमा कुनै पनि किसिमका योजना नभएको उनले ट्वीटरमार्फत बताएकी छन् ।
युद्धग्रस्त क्षेत्रमा भ्रमण नगर्नु सुरक्षा चासोबाट मात्रै होइन । त्याहाँ प्रसस्त मात्रामा स्रोत साधन भएको र त्यसबाट युक्रेनको अवस्थाको बारेमा थाहा पाउन सकिने भएकाले सोही मुलुकमा भ्रमण गर्नु आवश्यक नभएको प्रवक्ताले बताइन् । यो सधैको कारण हो । यो भन्दा पूर्वका समयमा पनि यसै किसिमबाट कुनै पनि मुलुकको अवस्थाबारे जानकारी लिन सकिन्थ्यो ।
तर राष्ट्रपतिले पनि महसुस गरे र सुरक्षा टोलीले निरन्तर सैन्य समन्वय, मानवीय र आर्थिक समन्वय दुवै निर्धारण गर्न ब्रसेल्समा नेटो नेताहरु, जि–७, ईयूसँग बैठक बोलाएर सबैभन्दा प्रभावकारी यात्रा गर्न सक्ने महसुस गरे ।
नजिकैको पोलयान्डमा गएर शरणार्थी, शरणार्थी सहयोगको बारेमा कुराकानी गर्न सकिन्छ,’साकीले बताइन् । बाइडेनले मार्च २४ मा ब्रसेल्समा आयोजना हुने नेटोको सम्मेलन र अन्य भेटघाटमा भाग लिने समयतालिका निर्धारण गरिएको छ । त्यसपछिका दिनमा उनी आफ्नो पोलिस समकक्षीसँगको भेटघाटमा जान सक्ने ह्वाइट हाउसले जनाएको छ ।